आफन्तलाइ चि्क्दा: March 2012
“भाउजु ! नाई ! दाई ले था पाउनु भो भने बर्बाद हुन्छ।“ मैले एसो भनेको त उन्ले “ आ ..कै थापाउदैनन् ।एकैछिन त हो!!” पो भनिन् । ।मलाई अघिदेखिको सेक्सि कुरोले भाउजुलाई चिक्नु पाए पनि हुन्थ्यो भैराको थियो। त्यस् पछि मलाई पनि आँट आयो अनि तुरुन्तै उन्को ओंठमा मेरो जिब्रो छिराई हालें मेरो जिब्रो मजाले चुसिन्।बिस्तारै मेरो लाँडो छाम्न थाल्नु भो।मेरो लाँडो अघिनै ठन्कि सकेको थ्यो । उन्ले छाम्दा त झन खपि नसक्नु भयो।तुरुन्तै मैले प्यान्ट खोलेर मेरो ठन्केको लाँडो के झिकेको मात्रै थिएँ उन्ले लोभ्भिदै भनिन् “ कत्ति मज्जाको ठूलो तपाईको??काठ जात्तिकै सारो पनि!” यसो भन्दै मेरो लाँडो सुम्सुम्याउदै चुस्नपो थालिन।मलाई त एत्ति मजा आयो कि बर्णन् नै गर्न सक्तिनँ। मैले ल्वात् ल्वात उन्को मुखमा हालि दिएँ। एकै छिनमा मेरो बिर्य झर्न खोज्यो अनि स्वाट्ट बाहिर निकालेँ। त्यस पछि उनि उठ्दै “छिटो छिराऊनु न ! आज म तपाईको इच्छा पुरा गरिदिनछु!”भनिन्।त्यस पछि तुरुन्तै उन्लाई पछाडि फर्काएर पेटिकोट उत्तानो पारेँ। अघिनै पेन्टि नभएकोले पेटिकोट उठाउने बित्तिकै उन्को पुत्ति देखियो। आहा! उन्को पुत्ति त अघिनै ल्याफल्याफ्ति भएछ।कस्तो भुक्क परेको ! शायद उत्तेजित भएर होला!! मलाई खपि नसक्नु भो।मेरो पालि घोप्टो पारि ल्वात्तै छिराई दिएँ।“ आ......उफ!!!!! कस्तो मजा भयो ठूलो ले त!!!”भाउजु बिस्तारि बोलिन। मलाई झन कस्तो मजा आयो।अनि ल्वाम..कि..ल्वाम चिक्न थालेँ।चिप्लो त ल्याफल्याफति!!! कस्तो तातो भित्र छिराउदा त!! मेरो त झर्न लाग्यो के गरौं ! उन्ले भित्रै झार्न भनिन!! उफ...मेरो लाँडो भित्र बाट सनन बिर्य आउन थाल्यो।आ....उम्......।चिरिक चिरिक उनको पुति भित्र मेरो बिर्य झर्न थाल्यो।उनि त मस्त मजा मान्दै थिईन...अम्......आ....भन्दै। बिर्य झरे पछि पनि एक छिन लवाम... ल्वाम... चिकिरहेँ।मेरो बिर्य ल्याच ल्याच भयो।अनि लाँडो झिकेँ। ल म अहिले जान्छु पछि कुरा गरम्ला है भन्दै मलाई कोठामा छोडेर आफ्नु कोठातिर लाग्नुभयो .. ।
Posted by kumcha at 2:02 PM No comments: